Sida lacag looga helo online | Wararka ECommerce
Sida lacag looga helo online
Waxaa sii badanaya in la raadiyo siyaabo lacag lagu helo online, si aad u hesho xoogaa dheeraad ah ama, yaa yaqaan, ma aha in aad goor hore kacdo si aad u shaqeyso laakiin aad sariirta ka boodo una aado kombayutarka. Laakiin, Sidee lacag looga helaa internetka?
Haddii aad sidoo kale la yaabban tahay oo aad rabto inaad ogaato waxa ay yihiin fursadaha aad u baahan tahay si aad u hesho mushahar kaas oo xitaa la barbar dhigi karo maalinta siddeed saacadood ah (waa inaad ku qaadato wax yar oo dheeraad ah si aad u tagto oo aad ku noqoto guriga), halkan waxaa ah fikrado .
1 Ku iibi alaabtaada yaryar onlayn
2 Samee kanaalka Youtube
3 Daabaco buugaagta
4 Iibso Sawiradaada
5 Noqo maamule bulsho
6 Caawiyaha Virtual
6.1 Samee mareegaha niche
6.2 Turjun qoraallada
6.3 Samee podcast-kaaga
6.4 Abuur koorsooyin onlayn ah
Ku iibi alaabtaada yaryar onlayn
Mid ka mid ah siyaabaha lacagta lagu kasbado internetka waa iibinta farsamada gacanta ama farsamada gacanta ee aad ku fiican tahay. Tusaale ahaan, saabuunta guriga lagu sameeyo, silsiladaha furaha, sanduuqyada dunta, caruusadaha, iwm.
Dhammaan kuwan waa xulashooyin aad u guulaysta haddii aad leedahay dhageystayaal aad ku gaari karto (marka hore waxaad gaari kartaa kaliya dadka aad taqaan, laakiin in yar wax yar waxaad awoodi doontaa inaad hesho macaamiil cusub).
Waxaad wax ku iibin kartaa Facebook, Etsy, abuurista degelkaaga ... Xataa furitaanka kanaalka YouTube kaas oo aad ku muujinayso habsocodka waxay noqon kartaa hab aad shaqadaada ugu soo dhawaato iibsadayaasha iman kara.
Samee kanaalka Youtube
Isagoo ka hadlaya YouTube, wax ay dad badani sameeyaan si ay lacag u helaan ayaa ah inay abuuraan kanaalkooda YouTube. Haa runtii, haddii aad runtii rabto inaad lacag ku samayso waa inaad si joogto ah ugu dhexjirtaa fiidiyowyada, Mawduucyo xiiso leh oo aad ka hadasho, oo ka sarreeya dhammaan ahaado mid cusub.
Iyadoo la tixgelinayo in ay jiraan balaayiin kanaal iyo in yar oo kaliya ayaa maamula si ay u soo baxaan hadda, waa inaad ka fekertaa fikrad ka xiiso badan kuwa guuleysta (ama ugu yaraan la qabsado).
Doorasho kale oo aad lacag ku kasban karto internetka waxay noqon kartaa tan. Haddii aad xirfad u leedahay ereyo iyo fikrado badan oo madaxaaga isku beddelaya sheeko-abuur, maxaad wakhtigaaga firaaqada ah ugu luminaysaa qoraalkooda? Marka aad hesho buuga la qoray, habeeyey oo dib loo eegay, intii aad u diri lahayd daabacayaasha, si toos ah ugu soo rar Amazon in loo iibiyo sida Kindle. Waa wax bilaash ah xitaa haddii kan ugu horreeya uu kugu kiciyo sababtoo ah ma garanaysid sida uu u socdo, waxay noqon kartaa guul xagga iibka ah.
Sidoo kale, haddii ay dhacdo inaadan garanayn, hadda daabacayaashu waxay u muuqdaan inay aad uga warqabaan goobaha daabacaadda bilaashka ah (Amazon, Lulu, iwm.) sababtoo ah haddii ay arkaan buug dib loo soo celiyay, waxay isku dayaan inay la xiriiraan qoraaga sida ugu dhakhsaha badan si ay u bixiyaan daabac buuggooda. Dabcan, taxaddar, sababtoo ah malaha waxa ay ku siinayaan iyo waxa aad ku guuleysan karto bilaash maaha isku mid.
Haddii aad jeceshahay sawir qaadista oo aad had iyo jeer gacanta ku hayso kamarad, ma ogtahay inaad lacag ku kasban karto hiwaayaddaas? Hagaag haa, way fududahay. Kaliya waa inaad qaado sawiro tayo leh oo ku dheji goobaha sawirada (lacag ama xitaa bilaash). Dhab ahaantii dhamaantood lacag ayay ku siinayaan haddii dadku isticmaalaan sawirka, si aad mushahar fiican uga heli karto.
Noqo maamule bulsho
Ku dhawaad ​​dhammaan ganacsiyada, eCommerce, iwm. waxay leeyihiin shabakado bulsho. Laakiin intooda badan ma awoodaan inay daryeelaan iyaga oo inta badan shaqadan u wakiishay dad ama shirkado kale.
Markaa, hal dariiqo oo lacag lagu kasbado internetka ayaa noqon kara tan. Haddii aad ku fiican tahay inaad la xiriirto isticmaalayaasha warbaahinta bulshada oo aad "iibiso" ganacsi, waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto shaqo faa'iido leh.
Kaaliyaha casriga ah wuxuu noqon karaa shay la mid ah xoghaye. Laakiin sidoo kale xisaabiye, ama qareen. Hadafka ayaa ah in aad awood u yeelatid inaad u bandhigto adeegyadaada macaamiisha oo aad lacag ka qaadato.
Mararka qaarkood, haddii ay tahay adeeg hal mar ah, waxa kaliya oo laga qaadi lahaa la-talintaas, laakiin qaar kale oo badan ayaa lagu dhiirigeliyaa inay ku shaqaaleeyaan dhowr bilood, gaar ahaan haddii ay arkaan inaad tababartay, waad habaysan tahay oo aad awoodi kartaa. ka caawi inay qorsheeyaan maalintooda maalinba maalinta ka dambaysa.
Samee mareegaha niche
In kasta oo tan laga yaabo in aad wax yar ku maalgeliso tababarka ka hor, runtu waxa ay tahay in ay tahay fikrad aad u cajiib ah oo ay ku xiisayn karto. Waxay ka kooban tahay iibso domain iyo martigelin oo lacag ka samee bogga si aad u hesho soo laabasho weyn.
Tusaale ahaan, qiyaas in aad aragtay in badeecad ama mawduuc ay kor u kacayso, sababtoo ah waxaad raadineysaa domain ku habboon, martigelin iyo waxaad dejisay shabakad. Waxaad ku siinaysaa xoogaa nuxur ah oo waxaad ka faa'iidaysanaysaa.
Waxay u muuqataa mid sahlan, laakiin maahan, in kasta oo ay jiraan qaar sheegaya in 3 bilood gudahood aad horeba u heli kartaa xoogaa lacag ah (oo haddii aad sii wado ka shaqeynta waxaad heli kartaa ilaa mushahar).
Turjubaanada khadka tooska ah sidoo kale waa shaqo aad ka heli karto onlayn. Waxaa jira goobo badan oo lagu bixiyo adeegyadaada, laakiin sidoo kale shirkado badan oo iyaga raadsada. Dabcan, waxaan kugula talineynaa, haddii aad rabto inaad naftaada u hurto arrintan, ha la joogin oo keliya shirkadaha dalka. Ka raadi si caalami ah sababtoo ah shirkado badan ayaa laga yaabaa inay xiisaynayaan luqadaada.
Hagaag haa, sida kanaalkaaga YouTube, laakiin kiiskan waxaad mooddaa inay tahay "radio". Waxay ku saabsan tahay helitaanka samee barnaamij maqal ah oo soo jiidasho leh oo qof walba doonayo inuu maqlo.
In kasta oo ay horeba u badnaayeen, haddana waxa jira meel bannaan oo lagu heli karo booskaaga. Dabcan, waa inaad ka shaqeysaa, labadaba qoraalka, muusikada, martida aad haysato, iwm. Waxaasoo dhan waxay wanaajin doonaan fursadahaaga inaad ku guulaysato oo aad lacag samayso.
Oo sidee lacag ku heli kartaa haddii ay tahay bandhig raadiyaha? Hagaag, sida kuwan oo kale: in shirkaduhu xayeysiiyaan. Si tan loo sameeyo, marka hore waa inaad haysataa tiro wanaagsan oo dad ah oo ku dhegaysanaya.
Abuur koorsooyin onlayn ah
Haddii aad ku fiican tahay mawduuc, oo aad sidoo kale aragto in ay tahay wax ay dadku dalbanayaan, maxaad u tagi weyday? Haddii aad leedahay aqoonta ay u baahan tahay in dadku fahmaan taas, waxaad heli kartaa lacag koorsooyin abuurista. Oo maya, uma baahnid inaad leedahay degel sababtoo ah waxaa jira goobo ay kuu oggolaadaan inaad geliso koorsooyinkaaga si aad u iibiso. Dabcan, waa inaad duubtaa fiidiyowyada, sababtoo ah hadda sidaas oo kale ayaa loo iibiyaa.
Mararka qaarkood waxaad dejisaa qiimaha, oo waxaad ku samayn kartaa "calaamad", si, waqti ka dib, dadku waxay ku raadin doonaan aqoontaada.
Sida aad arki karto, waxaa laga yaabaa in su'aashu aysan ahayn sida lacag looga helo khadka laakiin maxaad taqaanaa sida loo sameeyo si aad uga faa'iidaysato kartidaada iyo kartidaada aad ku abuuri karto ganacsi online ah oo saameeya akoonkaaga bangiga "si togan" bil kasta. Ma u taagan tahay mise mar horeba wax ma isku dayday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka ECommerce » Xaqiiqda iyo wararka » StartUps iyo ganacsatada » Sida lacag looga helo online